Fumanisa indlela yeenqaba zaseLoire eFrance | IBezzia
Indlela yeenqaba zaseLoire eFrance
Susana Garcia | 28/04/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
Ukuba sele ucinga ngohambo lwakho olulandelayo, awunakuphosa ezinye zezindululo zethu. Kukho iindawo eziya kuhlala zisishiya simangalisiwe, kuba zibonakala ngathi zithathiwe ebalini. Indlela yeenqaba zeLoire Valley eFrance Yenye yezo ndawo engashiyi mntu engenamdla. Yenye yeendlela ezithandwayo nezimangalisayo ezinokuthi zenziwe eFrance zisazi indawo egcwele iinqaba zobuhle obumangalisayo.
Xa sithetha ngeenqaba zaseLoire Sithetha malunga nolwakhiwo olufunyanwa kwinxalenye esezantsi esezantsi kwekhosi yoMlambo iLoire kumbindi weFrance. Uninzi lwezi nqaba zinemvelaphi yazo kumaXesha Aphakathi, zakhiwe njengeenqaba zokwenene, nangona zaphinda zenziwa ii-chateaux, ezenzelwe ukuba yindawo yokuhlala izidwangube. Namhlanje ezi nqaba ziyinxalenye yeWorld Heritage Site.
1 Lungiselela utyelelo lwakho
2 Inqaba yeSully-sur-Loire
3 Inqaba yaseChenonceau
5 Inqaba yaseVillandry
6 Inqaba yaseChaumont
Lungiselela utyelelo lwakho
Kwingingqi yeLoire Valley sinokufumana iinqaba ezingaphezu kwamashumi amahlanu, ezenza kube nzima ukuzibona zonke. Kungenxa yoko le nto idla ngokwenziwa luluhlu kunye neenqaba ezinomdla kakhulu, zisenza indlela yokuzigubungela. Uninzi lwazo lubekwe phakathi kweedolophu zaseAngers naseOrleans, ke indlela ihlala yenziwe ukusuka kwenye ukuya kwenye. Inkqubo ye- Amaxesha amnandi ngethuba lentwasahlobo kunye nokuwa, xa imozulu intle, kuba awungekhe utyelele iinqaba kuphela, kodwa kunye neendawo ezikungqongileyo ezinamahlathi, izitiya okanye izidiliya.
Le nqaba yenkulungwane ye-XNUMX yenye yezona zisetyenziswa kakuhle Njengenqaba yokuzikhusela kwiimfazwe. Ijikelezwe ngumjelo kwaye ungahamba ngendlela yawo okanye ungene ngaphakathi ukuze ubone ingcwaba le-Earl yeSully okanye isakhelo esidala senkulungwane ye-XNUMXth.
Le yenye yezona nqaba zintle eLoire kwaye yenye yezona zidumileyo. Yi Inkulungwane ye-XNUMX yenqaba eyaziwa ngokuba 'yinqaba yamanenekazi' ngenxa yotshintsho olwenziwe ngabafazi abohlukeneyo ngokuhamba kwexesha. Inenye yezona zinto zangaphakathi zinomtsalane kwaye inobuhle obukhulu ngaphandle ngethoni yayo emhlophe, iiturrets kunye negadi. Ngapha koko, ingqokelela ebalulekileyo yepeyinti ngamagcisa anje ngeRubens okanye iMurillo silindele ngaphakathi.
Le yenye inqaba ethandwa ngokwenene apho kufuneka ufumane ukungena kwangaphambili ukuze ungashiywa ngaphandle kwayo. UKumkani uFrancis I wasebenzisa amahlathi amahle angqonge ukuzingela kwaye yenye yezona zikhulu kuMlambo iLoire onamagumbi angaphezu kwamakhulu amane. Isinika umzekelo omkhulu woKuvuselelwa kweFrance kwaye inezitepsi ezinkulu ngaphakathi abathi ziyilwe nguLeonardo da Vinci.
Eyona gadi intle yeenqaba ze ILoire ibonakala ifumaneka kwiNqaba yaseVillandry. Le nqaba yakhiwa ngexesha Renaissance kwaye igadi enkulu kakhulu kwaye iyamangalisa ngokwenene leyo yenye intle eFransi. Banemiyilo eyahlukeneyo kunye nemixholo kumanqanaba amathathu emimandla.
Oku kufumaneka kwenye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekungafuneki zeqe. Le nqaba yekaCatherine de Medici kwaye yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX. Yinqaba enkulu enezitayile zesiNgesi kunye nemisebenzi yobugcisa. Yinqaba entle ebuyiselweyo eneenqaba eziphawuliweyo ezikhumbuza ezo nqaba zihlala ziselwandle. Ukongeza, kwi-terrace yayo ungabona umbono omangalisayo we-Loire Valley.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Indlela yeenqaba zaseLoire eFrance
Ivumba lamatswele, ndingayiphelisa njani ngokukuko?
Ungenza ntoni xa iqabane lingakuxabisi